Waa kuwee laptop Apple MacBook waa in aan soo iibsan? - Rule News
Mary loo baahan yahay in iyada bedelo 2009 MacBook Pro laakiin darnaado, by fursadaha. Kaas oo ah waxa ugu wanaagsan?
Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “Waa kuwee laptop Apple MacBook waa in aan soo iibsan?” waxaa qoray Jack Schofield, waayo, theguardian.com on Thursday 15 November 2018 10.00 UTC
Waxaan ku adkeystay la a 2009 MacBook Pro, oo aan u isticmaalaan internet, warbaahinta bulshada, sawiro, iyo cilmi-baarista. Laakiin si ay u helaan maktabadda jaamacadda fog, Waxaan leeyihiin in ay isticmaalaan nidaam hawlgalka kor-to-date, iyo Mac waa sidaas jir mar dambe waan u cusbooneysiin karaa.
Sidaas, Waxaan u baahan tahay si ay u iibsadaan MacBook cusub, laakiinse anigu waxaan ahay wayn oo ay fursadaha. Ma u baahan tahay Bar a Touch? xusuusta iyo SSD intee le'eg ayaan u baahanahay? Mary
ka dib markii ay wax soo saarka u raaxayn on 30 October, Apple ayaa afar MacBooks in sameeyo waxyaalo badan oo shaqo la mid ah. Warka fiicani waxa weeye in, haddii aad ku noolaan karaa on a 2009 MacBook Pro, kasta oo iyaga ka mid noqon doono ganaax ujeedooyin aad. Warka xumina waxa weeye in dhammaan ay leeyihiin sifooyinka off i lahaa gadashada, in kastoo, iyadoo nasiib, ay daruuri ma aha off idinka saari doonaan.
Si kastaba ha ahaatee, Waxaan u maleynayaa in lagama maarmaan ah in ay soo booqdaan Apple Store ama stockist kale si aad ugu yaraan is barbardhigi kartaa laba MacBooks kooxda 13Isla by dhinaca. Kuwanu waa MacBook Air jir (keyboard fiican, screen ugu xumaa) iyo Pro MacBook ah (keyboard aad u xun, screen weyn).
Waxaan kuu sheegi karaa oo chips waa ka dhaqso, iyo wixii la mid ah, laakiin aad waayo-aragnimo shakhsi heysataa by tayada keyboard iyo screen. post blog A kuuma sheegi karo kuwa aad jeclaan doonto, ama meesha aad jeclaan lahayd in la sameeyo tanaasul.
Dhammaan laptops cusub Mac la Apple ee keyboard balanbaalis low-safarka iman, kaas oo la xaqiijiyay kala qaybsanaan. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Aniga ahaan, dhibaatada ugu weyn leh ee MacBooks cusub waa keyboard balanbaalis ah, kaas oo markii ugu horaysay la soo bandhigay la 12in MacBook ee 2015. version labaad u muuqday in MacBook Faa'iido, halkaas oo tiro ka mid ah dadka isticmaala lahaa Guuldarrooyin keyboard sabab u ah ciidda ama dhabkiyo helitaanka furaha hoos. The MacBooks dambeeyay leeyihiin version saddexaad la quwad dheeraad ah si aad uga ciidda. Waxaan weli si ay u arkaan sida ay u taagan kor muddo.
taas laga soo tago, Waxaan ka heli keyboard balanbaalis ka bixisaa waayo-aragnimo u xun makiinada. Waxaan bartay inaan taabto nooca-on Abley, oo aan door bidaan teebabka la furayaasha farsamo badan safarka. furayaasha balanbaalis leeyihiin lahayn wax safarka. Tani waxay i riixi lahaa dhinaca MacBook ee Air jir, taas oo uu leeyahay keyboard aad u fiican by heerarka laptop.
Waxaa wax laga xumaado, ka MacBook Air jirkaan ayaa dhibaatooyin kale. Khaas ahaan, ka touchpad iyo daaha ka xun yahay kuwa ku jira cusub MacBook Air. (Waxay xun ma tihid, laakiinse iyagu ma ay tahay sida ugu fiican.)
si farxad leh, dhadhankii kala duwan. Dadka qaar ayaa doorbida flat, teebabka xaladda, oo aad ka heli kartaa sida keyboard balanbaalis ah. Haddii ay sidaas tahay, waxa ay taasi aad doorato fudud. Kaliya waxaan u malaynayaa in aad u baahan tahay si ay u siiyaan go halis ah - nooca dhowr boqol oo erayadan ku dul - ka hor inta aadan samayn si ay u isticmaalaya maalintii oo dhan maalin kasta ... ama sita ah keyboard USB dibadda agagaarka.
Touch Bar? Ha
Touch Bar The badalay furayaasha F on Pro MacBook ah. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Uma baahnid Bar a Touch. Dhab ahaan, ninna ma run ahaantii u baahan Touch Bar ah. Si kastaba ha ahaatee, waxay kaliya waxaa lagu rakibay si MacBook ee Faa'iido qaalisan, oo waxaan u qaadan in aad xiisayso iibsan MacBook badan ka qaalisan aad u baahan tahay aadan.
The 13bartamihii 2009-MacBook Pro lahaa Core Intel ah 2 processor Duo, taas oo ba'an by heerka maanta. model saldhig ku lahaa oo kaliya 2GB xasuusta (fideysa ayaa si 8GB) oo ah drive adag 160GB, in kastoo casriyaynta caadada ka mid 128GB iyo 256GB SSDs. MacBook adooy aad ka iibsan kartaa maanta yeelan doonaan caddaymaha wanaagsan.
Nasiib darro, ma waxaad u cusboonaynta kartaa MacBooks maanta, si aad u leeyihiin in ay soo iibsato awoodda sida ugu badan ee aad waligaa u baahan doontaa. Waayo, socdeyba, waxaa u roon in ay leeyihiin 16GB ee xasuusta iyo 256GB ama SSD weyn, laakiin Apple soo eedeeyo premium weyn u ah casriyaynta, kuwaas oo.
Nasiib wanaag, MacBooks si fiican aamusiin karaa qiimaha, si ka duwan yahay si ay u tagaan, waayo, Creech salka iyo, haddii aad ka heli aad u baahan tahay awood dheeraad ah, iibin iyo iibsan mid cusub.
MacBook wuxuu isticmaalaa Processor low-xoog Intel ee. Sawir: Apple
Waxaa jira dhibaato non-cad in in laba ka mid MacBooks aad suurto gal ah ayaa Intel Core M Processor, oo tanaasul xawaaraha si ay u siiyaan nolol batari fiican. Apple marka hore isku dayay la chip 1.1GHz dual-core M-5Y31 loo isticmaalo ee 2015 MacBook (12in screen). Maanta, M chips Core waxaa loo isticmaalaa ma aha oo kaliya in MacBooks 12in, laakiin sidoo kale in MacBook ee hawada ugu dambeeyey.
Ma ahan wax iska cad, maxaa yeelay, Intel beddelay nidaamka magaca ay. Dadka laga yaabo in ay ku riday off by the "Core M" naqshada malaha ma arki doontaa in ay hesho gabal ah taxane Y - gaar ah, a i5-8210Y Core - halkii ay ku chips taxane U awood badan loo isticmaalaa in laptops caadiga ah.
Waxaan waxba ka dhanka ah chips taxane Core M / Y leeyihiin, iyo 8GB / 128GB taabashada-screen Lenovo Yoga 700 ayaa ku Core M3-6Y30 isku loo isticmaalo MacBooks qaar ka mid ah. Farqiga u dhexeeya waa in ay mashiin loogu isticmaalo caadi ah / fasaxa, ma habka ugu muhiimsan oo kaliya iga goysay £ 339,99. Anigu ma aan iibsan lahayd mid ka mid ah sida mashiinka aan ugu weyn, oo ku amraya £ 1,200 waayo, mid baa qosol.
A Core i5-8210Y waa in ay si degdeg ah ugu filan adiga iyo iftiinka isticmaalaa - taas oo u koraan laga yaabaa in muddo - laakiin waxa ay weli lacag qiimo liidata ee MacBook Air a.
doorashooyin suurto gal
jir Apple ee MacBook Air. Sawir: Simon gufarkiisii ​​/ Future Publishing / Rex
Apple ayaa difaacday hore 13Isla MacBook Air, iyo waxa ay u egtahay qiimaha ugu fiican ee lacag dhan £ 949, inkastoo ay shanaad jiilka processor Core i5-5350U iyo non-retina screen. Waxay leedahay, Aniga aragtidayda, keyboard ugu fiican, iyo weli waxay leedahay dekado beryihii hore ee wanaagsan, oo ay ku jiraan booska card SD ah oo isku xira magsafe a. In isugu shabahay kale, ka MacBook Air cusub (2018) waa fog ka xoogbadan,.
The MacBook 12in jir ah ayaa weli waxaa laga heli karaa, laakiin waa underpowered iyo alaabada, la version 1.2GHz Core M3-7Y32 (2017) ujecel £ 1,249. Sababta kaliya ee ka fiirsaneysa inay mishiinka waa in ay ugu yar iyo daaraysaa (0.92kg) MacBook waxaad ka heli kartaa.
cusub 13Isla MacBook Air waa yar yar oo xumbo version hore, ayaa screen fog ka xoogbadan,, trackpad ciidan-taabashada weyn, oo ku hadla ka fiican. Waxa kale oo ay ka qaalisan at £ 1.199. cillado waxaa ka mid ah keyboard balanbaalis iyo processor taxanaha Core M / Y.
Ugu dambeyntii, waxaa jira ee Pro MacBook 13Isla aan Touch Bar (Bartamihii 2017-), kaas oo bixiya dhakhso toddobaad jiilka i5 Core 2.3GHz a (7360The) processor, muuqaallo aad u fiican iyo midabka roon dheeraad ah £ 50, ie £ 1,249. Pro waxa kale oo uu leeyahay screen ifaya - 500 qandhicilka halkii 300 qandhicilka - taas oo noqon waa in aad u fiican in loo isticmaalo dibadda. Waxaad lumin qaab wasladdii Air ee, taas oo raaxo badan, waayo, makiinada, laakiin Pro ma aha si weyn u sii cuslaan Air cusub (1.37kg vs 1.25kg).
Waxaan jeclaan lahaa inaan ku Pro MacBook dheeraad ah haddii ay ku lahaayeen keyboard Air jir, laakiin waxay ila eg tahay waxa iibsan ugu fiican - haddii aad awoodi kartaa. Sidoo kale waxaan u maleynayaa in bet ugu wanaagsan ee aad u updates nidaamka hawlgalka mustaqbalka.
casriyaynta yihiin, sida ku xusan, qaali. Kordhinta Pro ee 8GB xasuusta in 16GB kharash £ 180, iyo casriyeeyo SSD 128GB si 256GB kharash £ 200, sidaas Creech aad dhab ahaan doonayaan waa £ 1.629. Ku darista AppleCare kuuskuus ilaa qiimaha final inay £ 1.878.
Waa lacag aad u badan, laakiin qabaa waxaa ka mid ah sida £ 1 maalin ka badan shan sano oo ma dareemi doontaa si xun.
dhimista la heli karo!
Sida arday ka qalin ah, waa in aad u qalanto dhimis waxbarasho, taas oo keeni doona qiimaha. Hubi si aad u ogaato haddii ay tahay ugu fiican ee ay tan u sameeyaan via aad jaamacad, online, ama Store Apple ah.
Apple ayaa sidoo kale waxay bixisaa ganacsiga-tago on qalabka jir via ay GiveBack nidaamka. Kuuma sheegi karo inta aad heli lahaa oo aan tirada serial aad MacBook Pro. Waxaa laga yaabaa in aan wax badan oo, laakiin ugu yaraan warhorse hore aad si sax ah dib loo lahaa.
18896	3 Waa kuwee laptop Apple MacBook waa in aan soo iibsan?
← OnePlus 6T Review The 20 qalabka ugu fiican ee 2018 →